BYTEMARK dia manao fanomezana lehibe ho an'ny tetikasa Debian | Avy amin'ny Linux
BYTEMARK dia manome fanampiana lehibe ho an'ny tetikasa Debian
Ny tetikasa Debian dia nanambara izany Bytemark nanome seriver 16 Sela HP miaraka amina modely fitehirizana modular miaraka amin'ny fitehirizana 57TB. Ny mpizara vaovao dia hita ao amin'ny DataCenter vaovao an'i Bytemark any York, Angletera ary omena lanja ara-barotra amin'ny £ 150,000 isan-taona.
Bytemark dia miorina amin'ny mpizara Debian hatramin'ny nanombohany niasa tamin'ny 2002, zavatra namboarin'izy ireo fa tsara foana.
Amin'ity fihetsika ity dia nanandrana namerina zavatra izy Debian, ankoatry ny fanohana DebConf ary mandefa ny fonosanao manokana «symbiosis»Manao asa fampiantranoana mpizara Debian tsotra kokoa.
Tsy afaka manonitra ny ezaka ataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony an'arivony izahay, fa farafaharatsiny afaka mirehareha amin'ny fanomezana ampahany lehibe amin'ny fotodrafitrasa ataon'izy ireo.
Ity fanomezana ity dia hahafahan'ny ekipa fitantanan'i Debian hanolotra toerana ara-jeografika tsara kokoa ho an'ny serivisin'izy ireo, hanatsara ny fandeferany sy ny fahafahany. Ny fitehirizana fanampiny dia hamaha ihany koa ny olan'ny fahaizany, satria serivisy be fitehirizana maro no hafindra any amin'ny mpizara Bytemark ao anatin'ny fizotran'ny fampidirana. Ny antsipirian'ny fizotrany dia azo jerena ao amin'ny lisitry ny mailaka any Debian.
Fitaovana nomen'i Bytemark misy HP C7000 BladeSystem izay misy lozisialy 16:
12 BL495cG5 miaraka amin'ny 2x Opteron 2347 sy 64GB RAM tsirairay
4 BL465cG7 miaraka amin'ny 2x Opteron 6100 sy 128GB RAM tsirairay
Ary filaharana fitahirizana HP marobe:
Talantalana fanitarana 6 MSA2000
Miaraka amin'ireo bays fitehirizana 108, kapila SATA 500GB maro, 2TB sasany, kapila 600GB 15000 RPM SAS maromaro, fitahirizana 57TB.
Io fahaiza-manao io dia mitovy amin'ny 80 heny amin'ny archive Debian ankehitriny na in-3 ny archive snapshot. Saingy tsy tokony hohadinointsika fa ny rakitra roa dia mitombo hatrany.
loharanom-baovao: potika | Nalaina tao amin'ny The GUTL Mailing List
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » BYTEMARK dia manome fanampiana lehibe ho an'ny tetikasa Debian
Tsy misy antony tokony hampiasana ny teny Spanglish, raha efa misy amin'ny fiteninay ilay teny.
Raha ao amin'ny rakibolana ny teny Espaniôla dia Espaniola madio izany.
Lahatsoratra naroso hofafana.
Preview ny fanontana fahatelo amby roapolo
mpanohana -ra. 1. '[Olona na orinasa] izay manohana na mamatsy vola hetsika iray, matetika amin'ny fanaovana dokambarotra': “Nisy koa ireo mpanohana kely izay nandray anjara […] tamin'ny fanatanterahana ilay tetikasa” (Torres Conquista [Mexico. 1990]). Ny fisian'ity feo espaniola ity dia mahatonga ny fampiasana ny mpanohana anglisy sy ny fanovana ny mpanohana azy tsy ilaina. Tsy misy ilana azy ireo ihany koa ny derivatives (e) mpanohana sy (e) sponsorización, izay mitovy amin'ny nentim-paharazana amin'ny Espaniola no manohana sy manohana.
2. Any amin'ny firenena amerikana maro, ny teny hoe mpanohana, mpanohana ary mpanohana dia ampiasaina, mitovy lanja sy tsara kokoa noho ny Anglicism: "antoko karakarain'ny mpanohana ny ekipanao" (Firenena [Kol. 29.7.97); "Ny hetsika dia tohanan'ny Ministeran'ny kolotsaina, ny tanora ary ny fanatanjahantena" (Nación [C. Rica] 17.3.97); "Very maina ny ezaka hahazoana ny mpanohana mpanamboatra fakantsary sy horonam-peo" (Dolina Ángel [Arg. 1993]).
Source: Diksionera Panhispanic of Doubts. http://www.rae.es/dpd/
Ny iray sy ny iray hafa dia mitombina ary tsy antony hanaovana fifanakalozan-kevitra, ampiasao ireo seho forum ho an'izany.
0.0 miantso ahy ho tsy mahalala ... azoko ny ampahany momba ny fanomezana fitaovana fa ... amin'ny Espaniôla, ahoana no mahasoa azy Debian? misaraka io tsy azoko io hehehe
Amin'izay ny serivera nomena dia ho an'ny fotodrafitrasa Debian. Ny fihenan-tsasatra tsara kokoa ao amin'ny repos, ny hafainganam-pandeha bebe kokoa hanamboarana fonosana, ny distro tsirairay dia manana mpizara marobe amin'ny asa samihafa.
oh ... misaotra 😀
Ny fandeferana amin'ny tsiny indrindra amin'ny alàlan'ny fananana redundancy ny serivisy amin'ny toerana hafa ara-jeografika sy ny fampidirana fahafaha-mitahiry betsaka kokoa
Tsara ho an'i Debian. Koa satria ao anatin'ity isika, rahoviana i Debian 7?
Ary satria manana mpizara vaovao izy ireo, ny fanajana endrika mankany amin'ny pejy ofisialy dia tsy mety haratra.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia heveriko fa hanana ny fanambarana ofisialy ao anatin'ny 2 herinandro isika.Feloka 50 na vola mitovitovy aminy no namboarina. Niaraka taminy nametraka tamin'ny alàlan'ny kapila netinstall iray aho nanomboka ny volana desambra ary tsy nanana olana na kely aza aho.
Nijery tsara aho izao: bibikely 38 hita !!
Marina izany, toy ny pejy PHP, pejy mampihoron-koditra, nefa na izany aza, io no fiteny ampiasaina amin'ny Internet.
Na dia "mahatsiravina" aza ny pejy PHP dia mahavita ny asany tsara izy. Isaky ny mitady asa aho dia sambako mahita azy. Ary voarakitra an-tsoratra tsara ny zava-drehetra. Te hanana fiteny mitovy amin'ny pejy PHP aho amin'ny fiteny hafa.
PHP koa tsy famolavolana. CSS ny layout.
Sponsori inona? Angamba izany no nandikan'ny google azy. Betsaka ny teny amin'ny fitenintsika mahafinaritra mba hanandramana mampifanaraka ny teny avy amin'ny anglisy. Tsy tsara kokoa ve izany: manohana, manohana, mampandroso, mamporisika? Na izany na tsy izany, maimaim-poana i Interner ...
Fandraisana anjara mahatalanjona, enga anie misy orinasa maro hanohana an'i debian.
Misy mahalala ve raha mivoaka i Debian 7 amin'ity taona ity?
Toa vitsy ny bibikely sisa azo amboarina (50 tavela araka ny filazan'i @ Ruffus- etsy ambony).
Manantena aho fa hivoaka tsy ho ela 🙂
Yohan Graterol (@yograterol) dia hoy izy:
Mandrenesa! Fanomezana tsara azon'izy ireo, vola be, antenaina fa orinasa maro no hanao toy izany, satria ankoatry ny mpiara-miasa dia ilaina ny vola sy ny fitaovana hitazomana ny fampandrosoana ny tetikasa.
Mamaly an'i Yohan Graterol (@yograterol)
Saingy servisy taloha izy ireo ... ao anaty lelany ary ao anaty lozisialy sy serivera no andehanan'izy ireo ao amin'ny lozisialy G8 ary koa MSA2000 dia fitaovana efa taloha (ny farany indrindra dia ny P2000 G3 ary avy amin'ny 3 taona lasa izay).
Tampoka teo dia lafo kokoa ny drafitra fanohanana aorian'ny fiantohana.
Koa satria betsaka kokoa ny papista noho ny Papa, atsaharo ny fandefasana fa mamaky fotsiny. Misy atiny tena tsara eto.
Andao hojerentsika raha manambara ny Debian 7 izy ireo ary afaka mametraka an'i Nvidia miaraka aminy aho, inona no entin'i Xfce amin'ny toerana misy anao? Liana amin'ny Darktable 1.2 farany aho… uhm, efa maniry mafy ny PPA izahay….
PS: iza no miraharaha izay lazain'ny RAE. Manorata araka izay tianao
Io "manoratra araka ny itiavanao" io dia tsy mahalala. Tokony hiezaka hampiroborobo ny fiteninao ianao, satria raha tsy izany dia misy olon-kafa mahasakana anao.
anti rae dia hoy izy:
Ny RAE dia tsy fahefana, raha mandinika azy ianao dia amin'ny alàlan'ny safidinao malalaka ary satria tianao izany, saingy tsy maneho fahefana hafa ankoatry ny hoe te-hihaino azy ny olona noho ny TSY FAHAIZANA.
Tena tsy miombon-kevitra amin'ny fanapahan-kevitry ny RAE aho, ankoatr'izay dia tsy misolo tena fahefana ahy akory izany.
Mamaly an'i anti rae
ny RAE SI NO rafitra ambony indrindra miadidy ny teny Espaniôla.
Ny fanovana farany izay natolony dia heverina ho BURRADE ary ny MEDIOCRE tanteraka mampihena ny fiteny dia tsy manala ny ara-dalàna ao amin'ny taova.
Manaiky aho fa mahamenatra ny faneken'izy ireo ny fanodikodinana mahazatra ny miteny Espaniôla any Etazonia ho "fisoratana anarana" raha ny teny marina nisy foana dia ny "fisoratana anarana" sy ny toy izany, saingy indrisy fa ny rafitra ofisialy ihany no mifehy ny tenintsika.
Manamboninahitra ho an'iza? Ho an'ny vahoaka espaniola?
Soa ihany aho fa monina any Amerika, ary eto dia sady tsy manana fiandrianam-pirenena no tsy manana fahefana.
Na izany na tsy izany dia tsy misy olona (na Espaniôla aza) voatery hanaiky ny RAE, na iza na iza manao izany dia manao izany amin'ny safidiny samirery.
Angamba rahampitso hanana ny Akademia fiteniny ny mpifanila trano aminao ary aleon'ny olona kokoa ny Akademia toy izay ny RAE. Ny "ara-dalàna" an'ny RAE dia tsy mitombina tanteraka.
Ary ny RAE dia afaka miteny zavatra arivo, fa raha tsy raharahan'ny olona izany dia tsy dia misy dikany firy ny fahefany sary an-tsaina sy ny ara-dalàna.
Ny olona tsy miraharaha azy, tsy manaisotra ny rae, ny heriny, mitovy amin'ny governemanta io, azonao atao ny tsy miraharaha azy, fa raha misy lalàna milaza fa pio, dia pio, dia azonao atao izay tianao. Ny zavatra iray hafa dia toa tsy azoko loatra fa ny derivations avy amin'ny Espaniola dia te-hiteny amin'ny Espaniôla izay marina.
Fandriampahalemana sy repoblika.
namana tsara, aleo avelao amin'izay, raha te-hanaiky fahefana an-tsaina ianao no olana mahazo anao.
PS: Ahy ny fiteny toa anao; ary tsy nanandrana nilaza izay marina mihitsy aho fa nanamarika fotsiny fa ny RAE dia tsy manana fahefana mihoatra ny olona izay manapa-kevitra an-tsitrapo hihaino azy.
Mazava ho azy…, na inona na inona tadiavinao, dia satria manam-pahefana an-tsaina izany, maka fanadinana amin'ny fanoratana ny Castilian araka izay tadiavinao, avy eo lazao amiko hoe inona ny vokany…., Tokony handeha tsara izany? Samy tsy manana fahefana hahay hanoratra na hiteny tsara ireo zavamiaina ireo: D (ironika)
"Ny zavatra hafa dia toa tsy azoko loatra fa ny derivations avy any Castilian, te hilaza amin'i Castilian izay marina."
Azo antoka 😀
+1 amin'ny hevitra roa.
eta vien, ke kada one ezcriva komo tiany, hah ci todoz noz understandmoz 🙂
Mikasika ny vaovao, na dia tsy dia ela aza aho no tsy nampiasa an'i Debian, dia miaraka amin'ny Arch sy openSuse aho, faly ho azy ireo aho, ity fizarana lehibe ity dia mendrika an'ity sy bebe kokoa.
ok mpankafy ny RAE, hamaky rakibolana ary hampiasa win ****
Inona ny vaovao mahafinaritra tiako Debian, manana NAS roa aho miaraka aminy 😀
Andao jerena ny ankizy, efa nahitsiko ilay teny kely .. 😛
Haitra mihoampampana ho an'i Debian nahazo fanomezana lehibe toy izany!
Saingy mendrika izany i Debian ary bebe kokoa, distro izy io izay voatazona tsara!
Ataovy hatrany izany ..
Lahatsoratra mampihetsi-po, fofona.
Ary farany izao dia mivadika ho amin'ny fiaraha-monina sosialista firaisan-kina ity hatsarana ity.
Tsara. Mahafaly ny manana karazana orinasa toa izao izay manome lanja ny ezak'i Debian ho vondrom-piarahamonina manan-danja indrindra eo amin'ny tontolon'ny Linux.
Ny fanajako an'ity vondrom-piarahamonina ity, ary koa ny reharehako mampiasa Iceweasel 20 amin'ny Debian Squeeze-ko.
... Heveriko fa ho an'ireo mpizara dia hampiasa rafitra matotra izy ireo, ohatra ny HP-UX ...
[..] encerio […] —————-> maso ratsy inona
HP UX dia ho an'ny processeur Intel itanium. Fa mazava ho azy fa rafitra miasa "matotra" no hampiasaina, DEBIAN no hampiasaina!
vaovao tsara inona. tena tsara
Sabayon sy qgtkstyle
Manampia fampiasa fanampiny amin'ny Firefox avy amin'ny about: config